Kani kani waa fiidiyowgii dhabta ahaa ee AirPods 3? Maya, waa been | Waxaan ka socdaa mac
Kani kani waa fiidiyowgii dhabta ahaa ee AirPods 3? Maya waa been abuur
Waxay ahayd dhowr toddobaad ama halkii bilooyin aan ka hadalnay imaatinka suurtagalka ah ee qaar jiilka saddexaad ee AirPods oo aan ugu yeerno AirPods halkan hareeraheeda 3. Dareenkaan waa wax ka badan hubaal in Apple ay soo saari doonto jiil cusub oo ka mid ah sameecadaha caanka ah ee caanka ah dhawaanahan, laakiin kuwa ka muuqda fiidiyowga aan halkan ku wadaagno maahan.
Waana in cudurdaar kasta uu wanaagsan yahay in la soo bandhigo fiidiyoow ay qaar ka mid ah dhagaha dhagaha ee Apple cusub u muuqdaan oo ay caddeeyaan inay sidaas noqon doonaan. Dhowr jeer oo hore oo la soo daabacay iyo dhoowr waxyaalood oo xasaasi ah ayaa muujinaya samaacadaha suurta galka ah oo qof uu la yimaado fikradda bilaabista nooc been abuur ah oo iyaga ka mid ah oo sheegaya inay yihiin Apple ...
Markii hore tan Tweet ayaa lagu sii daayay koontada isticmaalaha Duan Rui waxaa jira mid kale oo waliba muujinaya AirPod-yada beenta ah 3. Waxaad toos ugu aadi kartaa astaantaada oo aad arki kartaa.
AirPods 3 alaab been abuur ah. pic.twitter.com/QGGtGti3pB
Xitaa falanqeeyayaasha heerka Ming-Chi Kuo, ayaa ka digay dhowr toddobaad ka hor imaatinka AirPod-yadaan cusub oo leh qaab qaab iyo naqshad runti la mid ah tan AirPods Pro hadda laakiin xoogaa kala duwanaansho ah gudaha iyo bilaa qashinka silikoonka qaybta ugu dambeysa. Taasi waa sababta aan u aragno kuwan dhegaha been abuurka ah ee Apple lagu eedeeyay hadda.
Waxaa macquul ah inay ku dambeeyaan iyagoo leh qaabkan ama la mid ah midka aan ku aragno fiidiyowyada koontadan ee Twitter, laakiin waxaan xaqiijin karnaa inaysan iyagu ahayn asalka Apple. Xaqiiqdu waxay tahay in markii asalka la sii daayo aan sidoo kale yeelan doonno nuqullo Shiineys ah, sida ku dhacday dhammaan wax soo saarka laga soo saaray Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Kani kani waa fiidiyowgii dhabta ahaa ee AirPods 3? Maya waa been abuur
Watchsmith ee Apple Watch wuxuu helayaa cusbooneysiin weyn